SBOTOP | အားကစားပွဲများနှင့် ကာစီနိုအတွက် အွန်လိုင်းအခမဲ့အလောင်းအစားဘောနပ်ဆိုဒ်
SBOTOP အသုံးပြုသူများအတွက် သီးသန့်အပေးအယူများ
တစ်ခါမှ မရခဲ့ဘူးခဲ့သလို ပျော်ရွှင်လိုက်ပါ။
Habanero’s Grand Premier ပြိုင်ပွဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Habanero’s Grand Premier ပြိုင်ပွဲပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီ! အမြင့်ဆုံး EUR 3,000 အထိအနိုင်ရမည့်အခွင့်အလမ်းကိုယခုပဲအမိအရ ရယူလိုက်ပါ။ ပြိုင်ပွဲစတင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စလော့ဂိမ်းများကိုပျော်ရွင်းစွာခံစားရအောင်!
ယခု ပါဝင်မည် စည်းမျဥ်းများနှင့် အခြေအနေများ
2022 တရုတ်နှစ်ကူးကို Pragmatic Play Caishen ၏ရတနာ EUR 1,500,000 ထိဖြင့် ဆင်နွှဲလိုက်ပါ။ Caishen က အောင်မြင်သည့် 2022 ကိုခေါ်ဆောင်လာပါစေ။